Krita 3.3 yakaburitswa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, iko iko kuwanikwa kweiyo nyowani vhezheni yeimwe yeakanakisa kudhirowa maturusi maturositi akaziviswa. Ndezve Krita, chirongwa chekushandisa mahara, zvachose mahara uye icho chatove mune yayo vhezheni 3.3.
Krita 3.3 inounza yakawanda nhaus, senge kuvandudzwa kuenderana nemapiritsi akasiyana siyana ekudhirowa uye ekugunzva masikirini, kusanganisira iwo ekuzvarwa mamwe emamwe madhiraivhu senge mamwe emabhuku e HP.
Iyo imwe yakakosha ruzivo, ndiko kusimudzira mukutsigirwa kweiyo HiDPI skrini, iyo iine akawanda akawanda madhi pamasendimita pane akajairwa masikirini. Ehe, yeuka kuti iwe unofanirwa kumisikidza rutsigiro urwu muchikamu chemasethingi, nekuti chakaremerwa nekutadza.
Krita 3.3 yakavandudzawo tambo yekuraira kubva kushanduro dzapfuura, nemirairo yakadai se "-fullscreen" yekuenda izere skrini zviri nyore. Uye zvakare, rutsigiro nemifananidzo yePNG yakagadziridzwa, iyo inogona kushandurwa zviri nyore kubva pa16 kusvika 32 bit, zvakare ichivandudza mashandiro ezvese zvinojeka.
Pakupedzisira, gadziriso inogadzirisa mushanduro dzakapfuura uye mashandiro akagadziridzwa zvachose. Krita inowanikwa yeWindows, Mac, uyezve, Linux. Iyo Linux vhezheni inoshandisa maQt maraibhurari kurodha mifananidzo, chimwe chinhu chinoita kuti chishandiso ichi chikurumidze.
Ehe, kana iwe uine iyo Deepi kugoverakwete chero chinhu chako che desktop desktop, Unogona kuve nematambudziko nekuda kwekumwe kusapindirana neraibhurari yeQt. Nekudaro, mune chero kumwe kugovera hauzove nematambudziko.
choko inoshandiswa nemamiriyoni evanhu kudhirowa, kuita graphic dhizaini uye zvakawandisa, kune manejimendi emifananidzo. Icho chishandiso chemahara, asi chine simba kwazvo, izvo zvinokutendera kuti ushande zvakajairika, usina kana chinhu chekugodora kune akabhadharwa vhezheni.
Krita 3.3 Inofanira kunge iri mumatura ekugovana aunofarira Uye kana isati yatove, hazvizotora nguva yakareba kuti ivandudze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 3.3 yakaburitswa yeLinux
Yakanakisa mupiro shamwari, uye chengeta yakadaro shamwari nekutipa iwo mukana wekutipa iwe neruzivo rwako uye nekutsvagisa iwe kwaunoita. Kwaziso.